Ny fahasamihafana eo an-dalam-pandaminana
Ny fahasamihafana eo amin'ny Lalànan'ny Fitsarana sy ny Lalàna manan-danja
Miara-miasa mba hanafahana ny fahamarinana rehefa miaro ny zon'ny tsirairay
Ny lalànan'ny lalàna sy ny lalàna manan-danja dia ireo sokajy roa voalohany ao amin'ny rafi-pitsarana roa amerikana . Ny lalàna momba ny fampandehanana dia mamaritra ny fitsipika izay handrenesan'ny fitsarana sy hamaritra ny vokatry ny heloka bevava rehetra, ny sivily ary ny fitantanana ara-panjakana rehetra izay nentina teo anoloan'ny fitsarana. Ny tanjon'ny lalàna mifehy ny fizika dia ny fiarovana ny zon'ny tsirairay mandray anjara amin'ny rafi-pitsarana. Amin'ny ankapobeny, ny lalàm-panorenana - ny fiasan'ny fitsarana - dia natao hanamarinana fa ny diplaoman'ny lalàm-panorenana momba ny Lalàna momba ny Lalàna dia arahina.
Ny lalàna manan-danja - ara-bakiteny ny "votoatin'ny" lalàna - dia manapaka ny fomba itondran'ny olona ny fitondrantena araka ny fitsipika ara - tsosialy ekena. Ny Didy Folo, ohatra, dia fitsipika manan-danja. Ankehitriny, ny lalàna manan-danja dia mamaritra ny zo sy ny andraikitra amin'ny fitsarana rehetra. Amin'ny tranga heloka bevava, ny lalàna manan-danja dia mamaritra ny maha-voafaritra ny fahatsapana ho meloka na ny tsy fananan-tsiny, ary ny fomba amoahana heloka bevava sy famaizana.
Amin'ny ankapobeny, ireo lalàm-panorenana dia mamaritra ny fomba fiasan'ny fitsarana momba ny fampiharana ny lalàna manan-kery. Koa satria ny tanjona voalohan'ny fitsarana rehetra dia ny mamaritra ny marina araka ny porofo tsara indrindra, ny lalàna mifehy ny fitsipika mifehy ny fahazoana porofo sy ny fampisehoana sy ny fijoroana vavolombelona vavolombelona. Ohatra, rehefa mitsara na manongana ny fanoheran'ny mpisolovava ireo mpitsara dia manao izany araka ny lalàna mifehy.
Ny Lalàna momba ny fanatanterahana sy ny lalàna dia miaro ny zonao
Raha toa ny fehezan-dalàna sy ny fehezan-dalàna rehetra dia mety ho novaina tamin'ny androm- pifehezan'ny Fitsarana Tampony sy ny fandikana ny lalàm-panorenana, ny tsirairay dia manana andraikitra hafa fa ilaina amin'ny fiarovana ny zon'ny tsirairay ao amin'ny rafi-pitsarana heloka bevava ao Etazonia.
Fampiharana ny Lalàna momba ny lalàna momba ny heloka bevava
Na dia efa nanaiky ny volavolan-dalàna momba ny lalàna aza ny fanjakana tsirairay dia antsoina matetika hoe "Code of Criminal Procedure", ny fepetra fototra arahina amin'ny ankamaroan'ny juridictions:
Ny fisamborana rehetra dia tsy maintsy mifototra amin'ny antony azo antoka ;
Ny mpampanoa lalàna dia mamoaka fiampangana izay tsy maintsy mamantatra mazava tsara ny atao hoe heloka bevava ataon'ny olona voampanga;
Ny olona voampanga dia napetraka teo anatrehan'ny mpitsara ary nomena fahafahana hiditra an-tariby - fanambarana ny fahatsapana ho meloka na tsy fananan-tsiny;
Ny mpitsara dia manontany ny voampanga raha mila mpisolovava voatendry izy ireo na manome ny mpisolovava azy manokana;
Ny mpitsara dia manome na mandà ny fandroahana na ny fifamatorana voampanga ary mametraka vola handoavana ny karama;
Ny taratasy fampahafantarana ofisialy any amin'ny fitsarana dia atolotra amin'ny voampanga;
Raha toa ny voampanga sy ny mpampanoa lalàna dia tsy afaka manao fifanarahana fifampiraharaham-pitiavana , voatondro ny datim-pitsarana;
Raha voampanga ho voaheloka ilay voaheloka, dia manoro hevitra azy ireo ny mpitsara ny amin'ny zon'izy ireo hiantso azy ;
Raha misy didim-pitsarana meloka dia manomboka amin'ny fizotry ny didim-pitsarana ny fitsarana.
Ao amin'ny ankamaroan'ny fanjakana, ireo lalàna ireo izay mamaritra ny fandikan-dalàna ihany koa dia mametraka ny fehezan-teny faran'izay avo indrindra, avy amin'ny famaizana am-ponja mandra-pahafatiny. Na dia izany aza, ny fitsarana fanjakana sy federaly dia manaraka fitsipika maro samihafa ho an'ny fanamelohana.
Fanampenam-bava any amin'ny tribonaly
Ny lalàm-piorenan'ny fanjakana sasany dia mametraka rafitra fitsaratsaram-poana na roa tapitrisa, ka ny didim-pitsarana dia atao any amin'ny fitsarana samihafa natao taorian'ny didim-pitsarana. Ny fizotry ny fotoam-pitsarana dia manaraka ny lalàm-pitsipika fototra mitovy amin'ny fahadisoana na ny tsy fananan-tsiny, miaraka amin'ny haino an-tariby iray ihany, ary mamaritra sazy.
Ny mpitsara dia hanoro hevitra ny mpitsara amin'ny fepetra henjana sazy izay mety hampiharina eo ambanin'ny lalàna momba ny fanjakana.
Fanampenam-bava any amin'ny tribonaly federaly
Ao amin'ny fitsarana federaly, ireo mpitsara dia mametraka fehezanteny mifototra amin'ny andalana torolàlana federaly kokoa. Amin'ny famaritana fehezan-teny mifanaraka amin'izany, 'ny mpitsara, fa tsy mpitsara, dia handinika ny tatitra momba ny tantaran'ny heloka amn'olona voavolavolan'ny manampahefana federaly, sy ny porofo notontosaina nandritra ny fitsarana. Ao amin'ny fitsarana federal, ny mpitsara dia mampiasa rafitra iray mifototra amin'ny faharesen-dahatry ny voampanga, raha misy, amin'ny fampiharana ny torolàlana momba ny fanamelohana federaly. Ankoatra izany, ny mpitsara federaly dia tsy manana ny lalam-barotra hametraka sazy henjana kokoa noho ireo azon'ireo fepetra famaizana federaly.
Ny lalàna momba ny fanaraha-maso dia naparitaky ny zon'olombelona tsirairay. Na ny fitsarana na fanjakana na federaly dia samy namorona ny fepetrany manokana. Ankoatr'izany, ny tribonan'ny distrika sy ny tanàna dia mety manana fepetra voafaritra izay tsy maintsy arahina. Ireto fomba fiasa ireto dia ahitana ny fomba famerenana ny raharaha any amin'ny fitsarana, ny fomba fampandrenesana ireo mpandray anjara, ary ny fomba amam-panao ofisialy momba ny fizotry ny fitsarana.
Ao amin'ny ankamaroan'ny juridictions, ny lalàna mifehy ny fizika dia hita ao amin'ny gazetiboky toy ny "Fitsipiky ny Fitsipika sivily", sy "Fitsipika Fitsarana". Ny lalàna mifehy ny fitsarana federaly dia azo jerena ao amin'ny "Fitsipiky ny Fanjakana Federaly".
Lalàna fototra momba ny heloka bevava manerantany
Raha ampitahaina amin'ny lalàna momba ny heloka bevava, ny lalànan'ny heloka bevava dia midika hoe "votoatin'ny" fiampangana natao tamin'ny olona voampanga. Ny fiampangana rehetra dia mifototra amin'ny singa, na ny fepetra manokana takiana handoavana ny fanamelohana heloka. Ny lalàna manan-danja dia mitaky fa ny mpampanoa lalàna dia manaporofo ny fisalasalana tsy azo lavina fa misy ny singa rehetra misy heloka bevava natao ho ampangaina ho an'ilay voaheloka ho voaheloka noho io heloka io. Ohatra, ny fiantohana ny faharesen-dahatra amin'ny fiampangan'ny fiarandalamby ho an'ny mpamono olona dia tsy maintsy manaporofo ireo singa manan-danja amin'ny heloka bevava:
Ny olona voampanga dia ny olona miasa ny fiara;
Ny fiara dia napetraka teo amin'ny lalam-bahoaka;
Ilay olona voampanga dia voapoizina ara-dalàna nandritra ny fiasan'ny fiara; ary
Nanana faharesen-dahatra teo aloha ny olona voampanga ho nitondra fiara.
Ny lalàna manan-danja hafa momba ny fanjakana mifandraika amin'izany ohatra dia:
Ny farafaharatsiny dia namela ampahatelon'ny alika ao amin'ny rà nalatsa-keloka tamin'ny fotoana nisamborana azy; ary
Ny isan'ny faharesen-dahatry ny teo aloha ho an'ny fiara fitotoana.
Satria ireo lalàna sy lalàna manan-danja roa dia mety samy hafa amin'ny fanjakana sy indraindray ny kaominina, ireo olona voaheloka ho nanao heloka bevava dia tokony hifampidinika amin'ny mpisolovava mpanao lalàna manan-kery eo an-toerana.
Loharanon'ny Lalàna manan-danja
Ao Etazonia, ny lalàna manan-kery dia avy amin'ny lalànan'ny fanjakana sy ny lalàna iombonana mifototra amin'ny fombafomba ara-piarahamonina ary ampiharin'ny fitsarana. Raha ny marina, ny Lalàna Common Act dia namorona lalàna maromaro sy lalàna mifehy an'i Angletera sy ireo zanatany amerikana talohan'ny Revolisiona Amerikana. Nandritra ny taonjato faha-20, ny lalàna manan-danja dia niova ary nitombo haingana toy ny Kongresy ary ny lalampanorenan'ny fanjakana dia nifamotoana sy nanavao ny foto-kevitra maro momba ny Lalàna iombonana. Ohatra, hatramin'ny fanolorana azy tamin'ny taona 1952, ny lalàna ara-barotra Uniform (UCC), izay mifehy ny fifanakalozana ara-barotra, dia nekena tanteraka ny fanjakana amerikana manontolo na ny ampahany amin'ny fanoloana ny Lalàna iombonana sy ny lalàna isan-karazany ho toy ny loharanom-bola tokana manan-danja ara-barotra.
Henry Ford sy ny Fihaonam-be Auto
Rudolf Diesel, Mpamorona ny Engine
Fanitsiana fahefatra: soratra, fiandohana ary teny
Elephant Toothpaste Demonstration Chemistry
Ahoana ny fomba hanombohana ny famolavolana lalao ho an'ny finday finday
Ny biby 10 mahazatra indrindra an-tanàn-dehibe
Ahoana ny fomba hananganana Sparkler
Top Engineering Schools any Etazonia
Ahoana no fanaovana blasaka tsy Pop
Inona no tena mahasoa anao?
Inona no tokony ho fantatra momba ny neurotransmitters
Ahoana ny fahitana ny sarimihetsika ho an'ny sarimihetsika tsara indrindra Oscar?
Ny dingana folo amin'ny raharaha heloka bevava
Fihaonan'ny NCAA I Northeast Constable: ACT Score Comparison
Tari-dalana ho an'ny mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny sivilizasiona Maya
Radio Directory Radio Rock Station
Mampiasà varahina ho an'ny fanaovana firavaka
Ny fangatahana trangam-piarahamonina dia miangavy ny raharaham-barotra
Miverina miverina amin'ny mpilalao milefitra avy amin'ny Nike Golf
Ady Vietnamiana: ny Afo ny Paska
Inona ny dikan'ny fanisana rehetra?
5 Mandainga momba ny Mpiady Brown
Fampiasana ny fomba "Split"
Ahoana no ahafahan'ireo mpifindra monina mahita kilasy anglisy
Top Guitars Acoustic Top Beginners
Famaritana matetika amin'ny siansa
Ny Pepper sy Water Science Magic Trick
Chultun - Fanafody fiarovana amin'ny ala Maya
Sarintany famakiana ho an'ireo mpangataka
'Karazan'olona SpongeBob SquarePants
Sary nalaina fohy nataon'i Karl Marx
Famaritana ny fehin-kevitra mifandraika amin'ny Complex
Famakiana: Ny fanendrena mandritra ny fialan-tsasatra # 1
Lesona mozika momba ny mozika: Inona no atao hoe mandanjalanja?